Abahlohli besiSombululo seMetron yokuhlobisa-abaThengi baseMelika abaCombulula isiSinyithi, kwiFektri
Z ebunjiwe yintsimbi yeflathi yentsimbi yefowuni eshinyeneyo yesandisi
Ubume be-Z bobume obungenaziphatho zentsimbi ye-wire mesh yokuhanjiswa kwebhanti, ibhanti egudileyo yokuhanjiswa kweeflethi ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, umgangatho awunasiseko se-304. Ezinye izinto ezikhoyo zibandakanya: Intsimbi ye-316 yentsimbi, iicarbon ezahlukeneyo zekharbon, kunye nezixhobo eziphezulu zobushushu bokusebenza.
I-Metal sequin mesh kukunxibelelana nge-sequins ezininzi (ezinamasebe ama-4) kunye neeringi, ijongeka njengesigcawu, 'umlenze' ngamnye we-sequin usebenza kwindandatho kwaye usonge ngokwayo ukuze ukhuseleke.
Njengoko imfuno yefashoni isitayile, ngakumbi okhethekileyo kunye nekhethelo lokuhlobisa elikhethekileyo latsala abantu.
Eli khonkco lokuhombisa elikhethekileyo lakhiwa nge-13mm ikhonkco lokudibanisa ikhonkco ekulula ukudibanisa kulo kwaye ulikhuphe. Nazi ezinye zeenkcukacha zekhethini lokuhombisa lokuhombisa.